Iindaba -Uyifumana njani ikowuteshini echanekileyo yeprojekthi yebhegi yakho?
Uyifumana njani ikowuteshini echanekileyo yeprojekthi yebhegi yakho?
Abathengi abaninzi abafuna iifektri zebhegi banethemba lokufumana iikowuteshini ezichanekileyo ngokukhawuleza kwiibhegi zabo ezenziwe ngokwesiko. Nangona kunjalo, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kunzima kubavelisi ukuba bakunike ikowuteshini echanekileyo ngaphandle kweenkcukacha zesampulu okanye zebhegi. Ngapha koko, kukho indlela yokufumana ikowuteshini echanekileyo, makhe sijonge!
Iifektri zesikhwama ngokubanzi zibala ixabiso ngokusekwe kuyilo, izinto kunye nobungakanani bengxowa. Ukuba umthengi uthumela imifanekiso kumenzi, umenzi akaqinisekanga ngeenkcukacha ezithile zephakeji kwaye akanako ukunika ikowuteshini echanekileyo.
Ke ngoko, ukuba ufuna ukufumana ikowuteshini echanekileyo, eyona ndlela ifanelekileyo kukuthumela isampulu yomenzi kwaye umenzi makacaphule elona xabiso. Ukuba awunayo isampulu ebonakalayo, unokubonelela ngokuzoba kuyilo olunzulu kumenzi. Umenzi unokwenza ibhodi ngokoyilo lwakho. Emva kokuba isampulu igqityiwe, ixabiso liya kuphuma.
Ukongeza, kukwabaluleke kakhulu ukuthenga ezivenkileni, ukuze ufumane umbono ombi wexabiso leebhegi kwaye uphephe ukukhohliswa ngabenzi abathile abangaqhelekanga ngokuxela amaxabiso aphezulu ngabom.